ခင်ပွန်းရဲ့အချစ်တွေနဲ့တင် လူ့ဘဝကြီးမှာနေထိုင်ရတာ တကယ်တန်နေပါပြီဆိုတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ – The Padaythar
ခင်ပွန်းရဲ့အချစ်တွေနဲ့တင် လူ့ဘဝကြီးမှာနေထိုင်ရတာ တကယ်တန်နေပါပြီဆိုတဲ့ ခရစ္စတီးနားခီ
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းကို ချစ်တတ်လွန်းကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသား ဇဏ်ခီနဲ့ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီ တို့ အနုပညာရှင် ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ လေးစားအားကျ ချစ်ခင်နေကြရတဲ့ အနုပညာရှင် စုံတွဲလေးပါ။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိထားခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ ဇနီးမောင်နှံ နှစ်ယောက်ကတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းချစ်တတ်ကြလွန်းတဲ့ သူလေးတွေဖြစ်တာကြောင့် ယနေ့ကျရောက်တဲ့ Valentine ချိန်ခါလေးမှာ အရမ်းကို ရိုပြခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရမ်းကို ရိုထားခဲ့ကြတဲ့ ခီမောင်နှံရဲ့ ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကို လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ ခီမောင်နှံရဲ့ ချစ်စဖွယ်ပုံရိပ်လေးတွေကို ဆက်လက်ပြီး ကြည့်ရှုအားပေးသွားကြပါဦးနော်။
ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုမန့်တစ်ဆန်တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးထားခဲ့တဲ့ ခရစ္စတီးနားခီကတော့ ” လူ့ဘဝဆိုတာ မပြေလည်ခြင်းတွေ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဒုက္ခတွေ အလုပ်ဝန်တွေ မိသားစု ကိစ္စတွေနဲ့ ပူပင်သောက ကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြရသလို မတူညီတာတွေ သဘောမတူတာတွေကို ညှိနိုင်းနေထိုင်ကြရတယ်… ဘာတွေဖြစ်နေနေ ဘယ်လိုအချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘဝရောက်ရောက် အရွယ်တွေဘယ်လိုပြောင်းလာလာ ဘာတွေပဲဆက်ရင်ဆိုင်ရ သူ့အချစ်နဲ့တင် နေရတာ တကယ် တန်နေပါပြီနော်….”
” လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉နှစ်ကသာ V day မှာ ယူ့ကို ချစ်ပါတယ်လို့ ပြန်မဖြေခဲ့မိရင် အခုချိန်မှာ ကိုယ်ဟာလူ့ဘဝမှာ မရှိနိုင်တော့ပါဘူး… နာကျင်စရာတွေ သိပ်များတဲ့ လူ့လောကကြီးမှာ အသက်မရှင်ချင်ဘူးလို့ အခုတော့ မတောင်းဆိုရဲတော့ဘူး…ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆက်အချစ်ခံချင်သေးလို့… Love me until I d…. naw… Love Of My Life…” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ခင်ပွန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးသားဖော်ပြပေးထားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုတွေအပြည့်နဲ့ အရမ်းကို ချစ်ခင်ခဲ့ကြရတဲ့ ခီမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းပုံရိပ်လေးက မြင်သူတိုင်းကို အားကျစေနိုင်လောက်ပါပေတယ်နော်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်မှုတွေအပြည့်နဲ့ အရမ်းကို ချစ်ခင်ခဲ့ကြရတဲ့ ခီမောင်နှံနှစ်ဦးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကြည်နူးစရာ မြင်ကွင်းပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်ကြီးလည်း သဘောကျ နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းရဲ့ အချစ်တွေကြောင့်သာ အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်နေခဲ့ရကြောင်း ရေးသားဖော်ပြပေးထားခဲ့တဲ့ ခရစ္စတီးနားခီရဲ့ စာသားလေးကို ဖတ်ရင်း လေးစားအားကျ ကြည်နူးမိတယ်ဆိုရင် ဒီပို့စ်လေးကို Share ပြီး အားပေးသွားကြပါဦးနော်။ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အရမ္းကို ခ်စ္တတ္လြန္းၾကတဲ့ သရုပ္ေဆာင္ မင္းသား ဇဏ္ခီနဲ႔ ဒါရိုက္တာ ခရစၥတီးနားခီ တို႔ အႏုပညာရွင္ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ဟာဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြ ေလးစားအားက် ခ်စ္ခင္ေနၾကရတဲ့ အႏုပညာရွင္ စံုတြဲေလးပါ။ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို ရရွိထားခဲ့ၾကတဲ့ သူတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အရမ္းခ်စ္တတ္ၾကလြန္းတဲ့ သူေလးေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ယေန႔က်ေရာက္တဲ့ Valentine ခ်ိန္ခါေလးမွာ အရမ္းကို ရိုျပခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အရမ္းကို ရိုထားခဲ့ၾကတဲ့ ခီေမာင္ႏွံရဲ႕ ၾကည္ႏူးစရာေကာင္းတဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ပံုရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အရမ္းကို လိုက္ဖက္ညီလြန္းလွတဲ့ ခီေမာင္ႏွံရဲ႕ ခ်စ္စဖြယ္ပံုရိပ္ေလးေတြကို ဆက္လက္ၿပီး ၾကည့္ရွဳအားေပးသြားၾကပါဦးေနာ္။
ခင္ပြန္းနဲ႔အတူ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ရိုမန္႔တစ္ဆန္တဲ့ ပံုရိပ္ေလးေတြကို မွ်ေဝေပးထားခဲ့တဲ့ ခရစၥတီးနားခီကေတာ့ ” လူ႔ဘဝဆိုတာ မေျပလည္ျခင္းေတြ စိတ္ညစ္စရာေတြ ဒုကၡေတြ အလုပ္ဝန္ေတြ မိသားစု ကိစၥေတြနဲ႔ ပူပင္ေသာက ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းၾကရသလို မတူညီတာေတြ သေဘာမတူတာေတြကို ညွိႏိုင္းေနထိုင္ၾကရတယ္… ဘာေတြျဖစ္ေနေန ဘယ္လိုအခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘဝေရာက္ေရာက္ အရြယ္ေတြဘယ္လိုေျပာင္းလာလာ ဘာေတြပဲဆက္ရင္ဆိုင္ရ သူ႔အခ်စ္နဲ႔တင္ ေနရတာ တကယ္ တန္ေနပါၿပီေနာ္….”
” လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉ႏွစ္ကသာ V day မွာ ယူ႕ကို ခ်စ္ပါတယ္လို႕ ျပန္မေျဖခဲ့မိရင္ အခုခ်ိန္မွာ ကိုယ္ဟာလူ႕ဘဝမွာ မရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး… နာက်င္စရာေတြ သိပ္မ်ားတဲ့ လူ႔ေလာကႀကီးမွာ အသက္မရွင္ခ်င္ဘူးလို႕ အခုေတာ့ မေတာင္းဆိုရဲေတာ့ဘူး…ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဆက္အခ်စ္ခံခ်င္ေသးလို႕… Love me until I d…. naw… Love Of My Life…” ဆိုတဲ့ စာသားေလးနဲ႔ သူမရဲ႕ ေဖ့ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေန ခင္ပြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားလည္မႈေတြအျပည့္နဲ႔ အရမ္းကို ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကရတဲ့ ခီေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ၾကည္ႏူးစရာ ျမင္ကြင္းပံုရိပ္ေလးက ျမင္သူတုိင္းကို အားက်ေစႏုိင္ေလာက္ပါေပတယ္ေနာ္။
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ နားလည္မႈေတြအျပည့္နဲ႔ အရမ္းကို ခ်စ္ခင္ခဲ့ၾကရတဲ့ ခီေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးရဲ႕ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ၾကည္ႏူးစရာ ျမင္ကြင္းပံုရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ႀကီးလည္း သေဘာက် ႏွစ္သက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ခင္ပြန္းရဲ႕ အခ်စ္ေတြေၾကာင့္သာ အသက္ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနခဲ့ရေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပေပးထားခဲ့တဲ့ ခရစၥတီးနားခီရဲ႕ စာသားေလးကို ဖတ္ရင္း ေလးစားအားက် ၾကည္ႏူးမိတယ္ဆိုရင္ ဒီပို႔စ္ေလးကို Share ၿပီး အားေပးသြားၾကပါဦးေနာ္။ ၾကည့္ရွဳအားေပးၾကပါေသာ ခ်စ္ပရိသတ္မ်ားအေပါင္းကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ Surprise ကြောင့် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ စမိုင်းလ်
တတိယနှစ် စာမေးပွဲကြီးမှာ အောင်မြင်သွားခဲ့ရလို့ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေခဲ့တဲ့ ပိုပို